ဘုန်းကျော်: ပြည်ပမှာ ကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲ့တော့မည်
ခင်ဗျားဘလော့ကို ရောက်တာ မကြာသေးပေမဲ့ အကုန်လုံး ပြီးအောင်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ခင်ဗျားရဲ့ မဟုတ်မခံ စိတ်ကိုတော့ ကြိုက်တယ်။ ပြည်တွင်းမှာ မွတ်စလင်တွေ စစ်အစိုးရကို ထောက်ခံနေတာတွေ ကို ရှုပ်ချပြစ်တင်ပေးပါ။ ကိုယ်ကျိုးအတွက် စစ်အစိုးရနဲ့ ပေါင်းနေတဲ့သူတိုင်းကို ကျွန်တော်တို့ ရှုပ်ချကြရမှာ ဖြစ်တယ်။ အခုလည်း ပြည်တွင်းက မွတ်စလင်တွေက စစ်အစိုးရနဲ့ ပေါင်းနေတယ်ဗျာ။ သိရတော့ အတော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ်။ ဒီကိစ်စကို ဒီမိုကရေစီအတွက် တိုက်ပွဲ ၀င်နေကြတဲ့ နာမည်ကြီးဘလော့တွေကပါ ရှုပ်ချ ပေးနိုင်ရင်ကောင်းမယ်ဗျာ။ ဒါသိပ်အရေးကြီးတယ်
မွတ်စလင်တွေအများစုမှာ နိုင်ငံရေးမရှိဘူး။ စီးပွားရေးပဲ သိတယ်။ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ကြပေါ..။
ခင်ဗျားဘလော.ကနေဒီ နအဖ နဲ.ပေါင်းပြီးပြည်သူ.နောက်ကျောကိုဒါးနဲ.ထိုးတဲ.ဒီမူဆလင်တစုကိုပထမဦးဆုံး
ပြီးကိုယ်ကျိုး၇ှာတဲ. တေဇ တို.လိုဘလော.ပေါ်မှာဝေဖန်
ဒါဆို ကြံဖွတ် ပါတီဝင်ကုလားတွေက
စီးပွားရေး လုပ်နေတာလား ???
ကွက်ကျားမိုးရွာတာ တခုခုတော. တခုခုပဲ ။
ဦးတင်ဦး ( ဒု သမ္မတ ) - ၁
ဦးဝင်းတင် ( ဒု သမ္မတ ) - ၂
ဒေါ်မေ၀င်းမြင့် (ဒု-၀န်ကြီးချုပ်) -၁
ဦးဟန်သာမြင့် ( ကုလသမဂ္ဂ အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ် )
Who will handle ACA (Anti Corruption Agency )?
ဒီနေမှာ ကျွန်တော် နည်းနည်းပြောပါရစေ။ အထူးသဖြင့် မွတ်စလင်မ်ကိစ္စမှာပါ။ မွတ်စလင်မ်ထဲမှာ စီးပွါးရှာနေတဲ့ လက်ရှိအစိုးရကို ထောက်ခံတဲ့လူရှိသလို၊ အစိုးရကိုဆန့်ကျင်တဲ့ လူတွေလည်း တော်တော်များများ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ကျွန်တော့ အဖေတို့ဆိုရင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆွေမျိးတွေထဲက တချို့က အခုထိ အစိုးရနဲ့မပေါင်းဘဲ ထမင်းငတ်နေတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် မိမိကိုယ်ကို ဘာသာမဲ့လို့ ယူဆပြီး နိုင်ငံရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် ကိုယ့်အိတ်ထဲက ငွေအကုန်ခံပြီး လုပ်နေဒါ နှစ်အနည်းငယ်ရှိပြီ။ ဒါပေမယ့် တခြားတဘက်မှာ အခွင့်အရေးသမား မွတ်စလင်မ်တွေ လက်တဆုတ်စာ ရှိနေတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် က အီစ္စလာမ် ထဲက မွေးလာပြီး သူတို့ကို ကာကွယ်ပေးနေပေမယ့်လည်း ကျွန်တော့ကို တားဆီးနေတဲ့ ဒုက္ခပေးနေတဲ့ထဲမှာ မြန်မာမွတ်စလင်မ် အများစုဖြစ်နေတယ်။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော့ မူဝါဒဖြစ်တဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံ ညီအစ်ကိုမောင်နှမလို အေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ နိုင်ငံမှာ နေနိုင်ဖို့ အနစ်နာခံပေးနေဒါ ရပ်တန့်ရမလား။ ကျွန်တော့ ဆုံးဖြတ်ချက်က ဦးတည်ချက်အတိုင်းသာ ဆက်သွား။ ထိလာရင် ဘယ်ဘာသာဘဲဖြစ်ဖြစ် မျက်နှာသာမပေးဘူး ဆိုဒါကို လက်ကိုင်ထားတယ်။ ဒါကြောင့် ဘာသာမဲ့ပါလို့ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်တယ်။ ဒီလိုမူဝါဒနဲ့ မသွားရင်လည်း ဘာသာရေးက ကြားဝင်ပြီး ကျွန်တော့မူများကို ဖျက်စီးလိမ်မယ့်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်တော့မူဝါဒထဲကတစ်ချက်ကို အသိပေးပါမယ်။ ဒါကတော့ အီစ္စလာမ် လက်မထပ်ရမူ ဖြစ်တယ်။